Fangaro mifangaro amin'ny alikaola
Fangaro mifangaro amin'ny alàlan'ny alikaola (Solika am-bava Maxingshigan) Compositions: Ephedra, almonds mangidy, Gypsum, Licorice. Soso-kevitra: manaisotra ny hafanana amin'ny havokavony, manafoana ny vava ary mamelombelona ny asma, ary ampiasaina indrindra amin'ny hafanana anatiny, kohaka ary asma vokatry ny rivotra exogenous. Izany dia misoroka ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretina taovam-pisefoana nateraky ny otrikaretina virus, ohatra ny bronchitis tsy voan'ny areti-mifindra, laryngotracheitis tsy voan'ny tazo ary ny gripa malala sns .. Ny fampiasana sy ny fatra: mifangaro ny 250 ml vokatra miaraka amin'ny 150-250 k ...
Charagalus Polysaccharide Injection Character: ranom-boankazo-mavo, rano-boalavo dia mety hamboarina miaraka amin'ny fitahirizana fotoana ela na aorian'ny fandorana ny alany. Compositions: Astragalus Polysaccharide Indications: Ity vokatra ity dia afaka manosika ny vatana hamokatra interferon, mifehy ny fiasan'ny hery miaro ny vatana ary mampiroborobo ny fananganana ny antibody, ampiasaina amin'ny aretin'aretina virosy toy ny areti-mifindra amin'ny areti-mifindra. Fampiasana sy dosage: Ho an'ny tsindrona intramuskular na subcutaneous. Doka tokana, 2ml isaky ny kg vatana w ...